Life Style – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
02/06/2018 02/06/2018 Yawthama0Comments
———– ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ အဖိုးတန်တဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ တွေထွက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဗျာ။ လူတိုင်း အတွက် ကျောက်မျက်ရတနာဆိုတာ သည်းခြေကြိုက်ပစ္စည်းလေဗျာ။ ခင်ဗျားတို့သိတယ်မဟုတ်လား။ လူတိုင်းလူတိုင်းက အဖိုးတန်တဲ့ ရတနာပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဆင်မြန်းထားပြီဆိုရင် လူမမြင် မြင်အောင် ပြချင်ကြတာဗျ။
ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်တာနဲ့ပဲ ဘ၀ကြီးစုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်နေတဲ့ ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့အတွေးအမြင်ေ တွကို ပြောင်းပစ်ခဲ့သူတစ်ဦး
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းဖြေခဲ့တုန်းက **************************** မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆယ်တန်းမှာ ကျွန်တော့်လိုပဲ ရိုးရိုးသမာရိုးကျသာဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူများ စိတ်အားတက်ကြွစေရန်အလို့ငှာ ဒီစာကိုရေး လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဆယ်တန်းမှာ မအောင်လို့ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးအောင်ရ င် ဖြစ်စေ ဘ၀ကြီးကသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလို့
အပျိုကြီးလုပ်ခဲ့ရင် အိုဇာတာကောင်းပါ့မလား စိုးရိမ်နေသူများအတွက်
02/06/2018 03/06/2018 Yawthama
အပျိုကြီးတော့ လုပ်ချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် အိုဇာတာ မကောင်းမှာတော့ ကြောက်တယ် ဆိုတဲ့ မိန်းခလေး 10 ယောက်မှာ6ယောက်လောက် ရှိတတ်ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကတော့ ဒါဟာ
နွားဖိုးဘဲ ရင်းလိုက်တဲ့ တရုတ်တို့ဗျူ ဟာကို မသိနားမလည်တဲ့ တောင်သူများသို့ဝေမျှကြပါ
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာ…. ဖြစ်လာမဲ့နောက်တစ်ချက် ကျနော်သတိပေးလိုပါတယ်။ ကမ္ဘ္ဘာမီးလောင်သားကောင်ချနင်းမိမှာကျနော်စိုးရိမ်ပါတယ်။ အခု တရုတ်တွေဟာ ရွာလေးတွေအထိ နွားတစ်ကောင်ကို ၁၀ သိန်းကျော်အထိ ပေးပြီး လိုက်ဝယ်နေပါတယ်။ ပုံမှန်ပေါက်ဈေး ၄ ၅ သိန်းပဲရှိတဲ့ နွားတစ်ကောင်ကို သူတို့ဟာ ဈေးကို နှစ်ဆပေးပြီး
မြွေလူသား သို့မဟုတ် မင်းသား ရမ်ဒီယမ်၏ ထူးဆန်းသော ဇာတ်လမ်း
သူ့ကိုနာမည်မျိုးစုံပေးကြပါတယ်။ မြွေလူသား လူခူကောင် လူပေါက်ဖတ် စသဖြင့် ပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ကာဖွင့်လိုက်ပြီး မီးမောင်းသည် မင်းသားရမ်ဒီယမ်အပေါ်ကျရောက်တာနဲ့ ပရိသတ်သည် သူတို့မြင်ရမည့်မြင်ကွင်းအပေါ် ကြိုတင်မပြင်ဆင်နိုင်လောက်အောင် အံ့အားသင့်ရမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ မတ်တပ်ရပ်နေရင်း ၃ပေအမြင့်သာရှိသော မင်းသားရမ်ဒီယမ်ကတော့ သေချာပေါက် အံ့အားသင့်ဖွယ်
အပျို ကြီး ********** တံခါးခေါက်တိုင်းသာ ဖွင့်ပေးရရင် လော့ပျက်တာကြာပေါ့
အပျို ကြီး ********** တံခါးခေါက်တိုင်းသာ ဖွင့်ပေးရရင် လော့ပျက်တာကြာပေါ့ ပိုက်တွေ့တိုင်း ဝင်တိုးရရင် ဟင်းဖြစ်တာကြာပေါ့ သူတို့ မနာလိုလည်း မနာလိုချင်စရာ တစ်နှစ်တိုးတိုင်း တစ်မျိုးလှတဲ့ ဥဒေါင်းမလေးဖြစ်နေတာ ဖန်စီတွေဘယ်လောက်လှလှ စိန်က စိန်ပါပဲ တန်ဖိုးသိသူတွေ မြင်တတ်ကြည့်တတ်လိမ့်မယ်
“ဘယ်လောက်တောင် ဝိုက်သွားကြလဲ” လွှတ်တော်ကြီးဆောက်တုန်းက ခိုးခဲ့တာတွေ ဖုံးမရ ဖိမရ ​ပေါ်ကုန်​ပြီ.
31/05/2018 01/06/2018 Yawthama0Comments
ဖုံးမရ ဖိမရ ​ပေါ်ကုန်​ပြီ.. လွှတ်တော်ကြီးရဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို polish (ပေါလစ်ရှ်)တင်စရိတ်က ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၇၀၀ တဲ့…. လွှတ်တော်တွေမှာ Aircon တွေဖွင့်ရလို့ တစ်နေ့အတွက် လျှပ်စစ်မီတာခက သိန်းခြောက်ရာတဲ့။ လွှတ်တော်ကြီးတွေ ပိတ်ထားတဲ့ရက်တွေတောင် တစ်နေ့ကို မီတာခ
ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးစာ ဟောစာတမ်းကြီး
31/05/2018 Yawthama0Comments
ဒီ၂၀၁၈ထဲမှာ ဇာတာရှင်ဟာ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ ရှေ့ဆက်ရမဲ့ နှစ်ပါပဲ။ဘာမှအပြောင်းအလဲမလုပ်ပါနဲ့ ။ လုပ်မိတဲ့အပြောင်းအလဲက သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရင်နှစ်က လုပ်နေကြပုံစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားပါ။ လမ်းအိုလိုက်ပါ။ လမ်းသစ်မထွင်ပါနဲ့ ။ အလျင်းလို အနှေးဖြစ်တတ်တဲ့ နှစ်ပါပဲ။ မိမိစိတ်ထဲမှာ အရမ်းတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်။
Ex​ ​တွေကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုဆီက ရည်းစားတစ်ယောက် ထားခဲ့ဖူးတယ်။ ရည်းစားဖြစ်ခါစတုန်းကတော့ လမ်းမခွဲဘူး​နော်လို့ သူကချည်းပဲ အရင်စပြီး ကတိတွေ တောင်းတယ်။ ထားမသွားပါဘူးလို့လည်း သူကချည်းပဲ ကတိအရင်ပေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ယုံကြည်မှုတွေကို အလုံးအရင်းနဲ့ ထိုးပေးခဲ့တယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ အချိုးတွေပြောင်းလာတယ်။
ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ.. အချို့သော အမျိုးသားတွေက ဒီပို့လေးကို မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်နော်
ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ.. အချို့သော အမျိုးသားတွေက ဒီပို့လေးကို မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်နော် ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ • နံက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ “ မင်းနေကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ” စိုးရိမ်စကား ပြောပေးတတ်သူ။ • နံနက်စာစားတဲ့အခါ “ ကော်ဖီ ၁-ခွက် ကို